Aaway geeridii dhimatay ee dayactirka jiifka server - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
Hoyga > Wararka > Warka Warshadaha > Aaway geeska dhintey ee dayactirka jiifka serverka
Qalabka adeegga waa nooc ka mid ah mashiinnada iyo qalabka "qaaliga ah". Guud ahaan, waa in si joogto ah loo booriyaa oo loo ilaaliyaa si mashiinku si fiican ugu shaqeyn karo. Xaqiiqdii, inta badan waan iska indhatirnaa meelaha qaarkood inta lagu jiro dayactirka, markaa maxay yihiin dhammaadka dhimista dayactirkayagu? U fiirso talada lataliyeyaasha dayactirka xirfadleyda ah.
Dhinaca kale, waa daaweynta kuleylka kuleylka iyo hawo ka soo baxa shaashadda serverka. Hiitarka ayaa aad muhiim ugu ah martida, maxaa yeelay mashiinku wuxuu socodsiiyaa xog aad u tiro badan inta lagu guda jiro howsha, taasoo dhalin doonta kuleyl badan, marka waa in lagu kala diraa waqtiga. Guud ahaan, kaliya boodhka ka baxsan martida ayaa la saaraa inta lagu jiro dayactirka, laakiin boodhka ku yaal marawaxadu ma cadda waqtiga. Isbuurashada muddada dheer ee siigadu waxay si fudud u saameyn doontaa mashiinka.
Midda labaad waa dayactirka aasaasiga ah ee kumbuyuutarka kumbuyuutarka. Xaqiiqdii, ma jirto fiiro gaar ah oo loo hayo dayactirka maalinlaha ah ee server-ka martida loo yahay, illaa iyo inta aysan helin saameyn daran, waxaa loo isticmaali karaa si caadi ah. Si joogto ah u qaadista boodhka maalin kasta, iyo ka saarista boodhka ee caadiga ah ayaa xaqiijin kara isticmaalka caadiga ah ee mishiinka.
Hore:Sida loo kala saaro in mashiinka kontoroolka warshadaha uu khaldan yahay
Xiga:Si joogto ah u ilaali kiiska serverka si aad u hubiso nolosha martidaada